RASMI: Chelsea Oo Heshiis Cusub Oo Waqti Dheer Ah Ku Abaal Marisay Bartilmaameedkii Real Madrid & Barcelona Ee Marcos Alonso. – GOOL24.NET
RASMI: Chelsea Oo Heshiis Cusub Oo Waqti Dheer Ah Ku Abaal Marisay Bartilmaameedkii Real Madrid & Barcelona Ee Marcos Alonso.
October 24, 2018 Mahamoud Batalaale
Kooxda Chelsea ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay heshiis cusub oo waqti dheer ah ka saxiixatay difaaca bandhiga layaabka leh kooxdeeda ka soo sameeyay xili ciyaareedyadii ugu danbeeyay ee Marcos Alonso kaas oo hore loola xidhiidhinayay kooxaha dalkiisa Spain ee Real Madrid iyo Barcleona.
Chelsea ayaa ku guulaysatay in ay Marcos Alonso ku qancisay in uu kooxdeeda sii joogo shan sanadood oo kale isaga oo qalinka ku duugay qandaraas cusub oo shan sano ah taas oo meesha ka saaraysa xiisihii uga imanayay kooxaha dalkiisa ee Real Madrid iyo Barcelona.
War saxaafadeedka ay Chelsea ku shaacisay heshiiska cusub ee Alonso ayaa lagu yidhi: “Marcos Alonso waxa uu mustaqbalkiisa dheer u huray Chelsea isaga oo saxiixay heshiis ah ilaa 2023. Alonso waxa uu door muhiim ah ka soo ciyaaray koobabkeena Premier league iyo FA Cup isla markaana waxa uu noqday xubin ka tirsan xulka Spain tan iyo markii uu Stamford Bridge soo gaadhay August 2016”.
Kadib markii uu heshiiska cusub saxiixay ayuu Marcos Alonso dareenkiisa ka hadlay wuxuuna yidhi: “Anigu waxaan aad ugu faraxsanahay in aan halkan sii joogo in ka badan isla markaana aan sii wato ka ciyaarista mid ka mid ah kooxaha aduunka ugu fiican. Waxay ahaayeen laba xili ciyaareed oo fiican isla markaana wax ka badan ayaan rajaynayaa”.
Agaasimaha Chelsea ee Marina Granovskaia ayaa iyaduna ka hadashay heshiiska cusub ee ay kooxdeeda Chelsea ku abaal marisay Marco Alonso waxayna tidhi: “Waxaanu ku faraxsanahay in aanu kordhinay qandaraskii Marcos. Labadii xili ciyaareed ee la soo dhaafay waxa uu horumar u sameeyay ciyaartoy muhiim ka ah kooxda, waxa uu muujiyay awoodiisa cajiibka ah iyo maskaxdiisa fantastika ah taas oo ka caawisay in uu noqdo Championska Premier league iyo heerka caalami ee Spain”.
Marco Alonso ayaa ah xidig awood buuxda u leh in uu ka ciyaaro boosas kala duwan wuxuuna si wayn ugu soo shaac baxay shaxdii Antonio Conte ee 3-4-3 isaga oo min difaacasho, khadka dhexe iyo waliba gool dhalin layaableh isku darsaday.
Si kastaba ha ahaatee, Chelsea ayaa iska soo xidhay albaabkii Marcos Alonso ee kooxaha waa wayn ee Spain la xidhiidhinayay wuxuuna hadda saxiixay heshiis Stamford Bridge ku sii hayn doona shanta sanadood ee soo socda.